Utopia: tontolo ekena P2P itsinjaram-pahefana mahaliana ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Utopia: tontolo ekena P2P itsinjaram-pahefana mahaliana ho an'ny Linux
Ny lahatsoratray anio dia momba ny a Tetikasa IT mahaliana sy hafa miasa toy ny a vahaolana teknolojia rehetra ary a sehatra an-tserasera izay manambatra ny tsara indrindra amin'ny Tontolo DeFi miaraka amin'ny Tontolo GNU / Linux. Ary ny anaranao dia "Utopia" izay raha ny tokony ho izy, hita taratra tsara ny haben'ny tanjona kendreny.
"Utopia", raha ny tena izy dia araka ny mpamorona azy a ao anaty kitapo rehetra hampiasa fandefasan-kafatra mailaka azo antoka, serasera mailaka nafenina, fandoavam-bola tsy fantatra anarana ary fitetezana tranonkala manokana. Izay ankoatr'izay dia mety ny mampiasa azy Rafitra miasa GNU / Linux, satria, avelany hampiasa vola amin'ny fampiasana vola tsotra fotsiny Memory RAM (4 GB) misy ary adiresy IP ho an'ny daholobe raikitra.
Adamant: Fampandehanana hafatra tsy mitonona anarana maimaim-poana ary maro hafa
Ny sakan'ity Tetikasa IT tena mitovy izy io, saingy matanjaka kokoa noho ireo mitovy izay efa nojerena sy nozaraintsika teo aloha. Noho izany, avelantsika eo no ho eo ireo rohy voalaza Lahatsoratra mifandraika amin'ireo tetikasa ireo, ka raha ilaina dia mora vakiana izy ireo:
"Adamant dia rindranasan-kafatra fandefasana hafatra avy hatrany mifototra amin'ny teknolojia blockchain, izay miasa ho kitapom-bolan'ny Crypto sy Cryptocurrency Exchange System (Exchange). Adamant dia multipurpose sy descentralised amin'ny alàlan'ny teknolojia blockchain, ary mitovy amin'ny hafa toa an'i Juggernaut, Sphinx ary Status. Hatramin'izay, Juggernaut, Sphinx ary Status, dia tsy vitan'ny hoe manana tombony mahaliana amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, fa toy ny rafitra na fomba fandoavam-bola, satria mifototra amin'ny Blockchain Technology".
Juggernaut, Sphinx ary Status: fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo
1 Utopia: Hafatra eo noho eo, fandoavam-bola ary fizahana manokana
1.1 Inona ny Utopia?
1.2 Inona no atolotry Utopia ny mpampiasa azy?
1.3 Ahoana ny fampiharana Utopia amin'ny GNU / Linux?
1.4 Fampahalalana fanampiny momba ny Bot Mining
1.5 Mampiasa ny faucet hahazoana ampahany malalaka amin'ny Crypton (CRP)
2 Fampahalalana mifandraika bebe kokoa
Utopia: Hafatra eo noho eo, fandoavam-bola ary fizahana manokana
Inona ny Utopia?
Raha ny filazan'ny mpamolavola an'io Tetikasa DeFi ao amin'ny tranokala ofisialy, "Utopia" Voalaza vetivety sy mivantana izy hoe:
"A Kit ho an'ny rehetra amin'ny fampiasana hafatra fandefasana hafatra azo antoka, fifandraisana amin'ny mailaka voahidy, fandoavam-bola tsy fantatra anarana ary fitetezana tranonkala manokana. Na amin'ny teny hafa: ny fitaovana enti-miasa an-tserasera tsara indrindra ho an'ny fandefasan-kafatra eo noho eo, ny fandoavam-bola ary ny fizahana manokana".
Raha, amin'ny fomba mazava sy amin'ny an-tsipiriany kokoa, manampy an'izay izy ireo "Utopia" es:
"Vokatra hampiroboroboana ny fahalalahana, ny anarana miafina ary ny tsy fisian'ny sivana, izay natao ho an'ny fifandraisana azo antoka, fandoavana anarana tsy fantatra anarana ary fampiasana Internet tena malalaka sy tsy misy sisintany. Ny fanaraha-maso tanteraka, ny fifehezana ny fivezivezena amin'ny fampahalalam-baovao ary ny hosoka ofisialy dia izay kendrena sorohin'i Utopia fotsiny. Rehefa mampiasa Utopia ianao dia tsy hijery anao intsony i Big Brother.
Amin'ny Utopia dia azonao atao ny manalavitra ny sivana an-tserasera sy ny afomanga, mba hahafahanao mifandray amin'ireo olona tianao, rehefa tianao izany. Ny ekosistia Utopia dia manome antoka ny fahalalahana maneho hevitra. Ny toerana misy ny mpampiasa dia tsy azo aseho. Ny fifandraisana sy ny angon-drakitra dia tsy azo sakanana na vakin'ny antoko fahatelo. Ny tahiry kaonty rehetra dia voatahiry ao amin'ny fitaovan'ny mpampiasa Utopia eo an-toerana ao anaty rakitra voafafa".
Inona no atolotry Utopia ny mpampiasa azy?
Fifandraisana azo antoka tsy voafehy: Mba hahatratrarana sy hanaterana fifandraisana an-tsoratra, feo ary mailaka voafaoka eo noho eo.
Wallet mitambatra, CryptoCards ary API ho an'ny mpivarotra: Mba hahafahan'ny mpampiasa manao sy manangona fandoavam-bola miaraka Crypton, Vola elektronika an'ny Utopia manokana. Ny ecosystem dia mampiasa crypto stable ihany koa antsoina hoe Utopia USD (UUSD) mifamatotra amin'ny sandan'ny $ 1.
Rafitra fifanakalozana cryptoassets tafiditra ao amin'ny sehatra Utopia (Crypton Exchange): Izay manolotra fisoratana anarana kaonty tsy mitonona anarana sy mandeha ho azy ho an'ny mpampiasa, maodely ambany na tsy misy sarany, fisintonana mandeha ho azy tsy misy fetra, fanoherana ny sivana, endrika fifampiresahana eo amin'ny fiaraha-monina ary fanajana marina ny hevitry ny mpampiasa.
Tambajotra P2P itsinjaram-pahefana: Raha tsy misy mpizara afovoany ary ny mpampiasa tsirairay dia router amin'ny tambajotra.
Fitrandrahana mora: Ahafahan'ireo mpampiasa mahazo cryptons amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny botika fitrandrahana Utopia an-tserasera ary amin'izany dia ahazoana vola amin'ny fampiasana ny GNU / Linux Operating System sy ny fampiasana ny Utopia Platform.
Faucet tsotra: Fandraisana an-tranonkala izay ahafahanao mahazo ampahany kely amin'ny Crypton (CRP) amin'ny fampiasana ny tranokala Idyll tafiditra, indray mandeha isaky ny Wallet.
Drafitra manaja ny tsy itonona anarana: Utopia dia manome antoka ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, satria tsy azo ambara ny adiresy IP sy ny mombamomba azy ireo.
Fampiharana ny uNS: Rafitra fanomezana manokana ho an'ny Utopia Platform, izay manome rejistra tena tsy masiam-pahefana sy tsy voasivana, ary mitovy amin'ny DNS mahazatra.
Fikarohana azo antoka amin'ny fampiasana ny navigateur Idyll tafiditra: Izay miasa ho mpisolo toerana ny navigateur Tor ary manamora ny fitetezana ny ekosistia Utopia.
Fitehirizana sy fandefasana azo antoka: Amin'ny alàlan'ny fampiasana encryption AES 256-bit sy curve25519 haingam-pandeha.
Ahoana ny fampiharana Utopia amin'ny GNU / Linux?
Avy eo dia hasehontsika ny pikantsary nisesy ho an'ny misintona, mametraka, manamboatra ary mampiasa ny fampiharana ny Platform "Utopia". Tsara ny manamarika fa, ho an'ity tranga azo ampiharina ity dia hampiasa ny mahazatra izahay Mamerina Linux antsoina hoe Fahagagana GNU / Linux, izay miorina amin'ny MX Linux 19 (Debian 10), ary izany dia natsangana taorian'ny ny «Torolàlana Snapshot MX Linux».
Ho dingana voalohany dia tsy maintsy ampidininao ireo fonosana 2 mifanaraka amin'izany "Utopia" ho an'ny Linux ao amin'ny fizarana fisintomana ofisialy. Ny voalohany dia ilay mifanandrify amin'ny endrika sary eo amin'ny tontolo iainana, izay multiplatform (Windows, MacOS ary Linux) ary ny faharoa dia ilay mifanandrify aminy Bot fitrandrahana harena an-kibon'ny tany miaraka amin'ny fampiasana fitadidiana RAM ho an'ny Linux.
Vantany vao alaina ny roa dia azonao atao ny manohy ireto dingana manaraka ireto:
Mametraha interface interface amin'ny ecosystem «Utopia»: Amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal (console)
Fanatanterahana ny sehatr'asa misy eo amin'ny tontolo iainana «Utopia»: Amin'ny alàlan'ny Menu Applications.
Manomboka ny fikirakirana ny GUI amin'ny ekosistema «Utopia».
Module fanamarinana ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany amin'ny sehatr'asa «Utopia»
Fametrahana ny bot fitrandrahana ny tontolo iainana «Utopia»: Amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal (console)
Fampiasana bot "Ecopia Mining Ecosystem": Amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal (console)
Fomba fandefasana: Fampiasana ny làlan'orinasa miampy ny teny lakile rafitra, izany hoe ny adiresin'ny lakilem-bahoaka na ny ID an'ny Utopia Wallet (uWallet).
Fomba mod: Fampiasana ny lalana tanteraka miampy ny teny lakile rafitra, izany hoe ny adiresin'ny lakilem-bahoaka na ny ID an'ny Utopia Wallet (uWallet).
Ampiasao ny navigateur Idyll namboarina.
Fampahalalana fanampiny momba ny Bot Mining
Ataovy ao an-tsaina fa hampiasa ilay Botan'ny harena ankibon'ny tany farafaharatsiny fifanarahana tsara Memory RAM (4 GB) misy ary a fifandraisana Internet tsara miaraka amin'ny tsotra IP Public. Ary nanolorana azy ho fiarovana ny solosaina, hampiasa ny botan'ny fitrandrahana amin'ny solosaina misaraka amin'ny solosaina izay ampiasana ny interface graphique hidirana amin'ny Platform. "Utopia".
Na izany aza, solosaina ara-batana tokana no azo ampiasaina hidirana amin'ny Graphical Interface hiditra amin'ny Platform. "Utopia" miaraka amin'ny iray na maromaro Masinina virtoaly (MV) mitovy amin'ny Bot bota trandrahana takiana.
Mampiasa ny faucet hahazoana ampahany malalaka amin'ny Crypton (CRP)
Na izany aza, ho an'ireo izay tsy afaka mitrandraka an'i Crypton amin'ny fampiasana ny GNU / Linux Mining Bot manokana, satria tsy manana IP ho an'ny daholobe, RAM ampy na Internet manana kalitao, misy fomba mora kokoa ahazoana indray mandeha, Crypton maimaimpoana amin'ny fampiasana Utopia. Vola izay anelanelan'ny zavatra maro dia azo ampiasaina hanomezana valisoa / fanohanana / fandoavana / fanomezana ho an'ny hafa izay mampiasa GNU / Linux. Ireto dingana manaraka ireto dia tokony harahina, indray mandeha ihany:
Sokafy ny fampiharana utopia anay.
Sokafy ny tranokala Idyll mitambatra.
Soraty ao amin'ny bao fikarohana / adiresy ny url "http: // faucet".
Ampidiro amin'ny interface web misokatra ny lakilem-bahoaka (kitapom-bolantsika) hahazoana ny fraction Crypton (CRP) maimaimpoana, fenoy ny kaody captcha aseho ary kitiho ny bokotra "Get Free Crypton", ka ny Crypton (CRP) dia alefa any ny uWallet eo noho eo.
Andraso segondra vitsy ary manamarina ny famindrana vola ao amin'ny uWallet an'ny fampiharana Utopia.
Fampahalalana mifandraika bebe kokoa
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny ekipa ao aoriana ianao "Utopia" ary ny lampihazo mihitsy "Utopia" afaka mitsidika izao manaraka izao ianao rohy ofisialy mampahalala:
Tranonkala ofisialy FAQ
Tranokala Alternative Block Explorer FAQ
Ary raha te hahalala sy hijery momba tetikasa hafa mahaliana, ilaina ary hafa ianao, izay afaka manompo Rafitra fandefasana hafatra eo noho eo Hamela rohy avy hatrany amin'ireo famoahana teo aloha mifandraika amin'izy ireo eto ambany izahay.
Jami: sehatra vaovao ifanakalozana fifandraisana maimaimpoana sy manerantany
Fivoriana: Rindrambaiko fisoratana anarana azo antoka malalaka
Ary farany, maniry izany izahay Mahaliana, mpisolo toerana ary mamokatra Tetikasa DeFi, satria, raha tazonina, hatsaraina ary arakaraky ny fandehan'ny fotoana, dia mety ho tena ilaina sy mahasoa tokoa ho an'ireo mpampiasa an'i GNU / Linux.
Indrindra raha "Utopia" na olon-kafa Tetikasa DeFi amin'io karazana io dia manomboka ampidirina ao GNU / Distros Linux. Mazava ho azy, manomboka hatrany am-piandohana fa ny zava-drehetra Tetikasa DeFi, koa araka izay azo atao na misokatra tanteraka ary maimaimpoana. Ity fanazavana ity dia vokatry ny zava-misy fa amin'izao fotoana izao, "Utopia" Tsy tetikasa maimaim-poana sy misokatra tanteraka izy io, fa azo atao amin'ny ho avy ho tombontsoan'ny rehetra, raha efa matotra sy be loatra ny tetikasa.
Tsy isalasalana fa ity karazana Tetikasa DeFi hamela manaova vola amin'ny fampiasana ny Operating Systems malalaka sy misokatra miorina amin'ny GNU / Linux amin'ny alàlan'ny crypto tsy manam-paharoa na an'ny tenany miaraka amina vola be Memory RAM (4 GB) misy ary a fifandraisana Internet tsara miaraka amin'ny tsotra IP Public. Izay tena mifanaraka amin'ny hevitra navoakany teo aloha izay azo vakiana ato amin'ity publication teo aloha ity:
Crypto: Andao hataontsika tsara indray ny GNU / Linux! Miaraka amin'ny Cryptocurrency?
Raha tsorina "Utopia" mahafinaritra sy mahaliana izy io Tetikasa DeFi izay manolotra tsy tsara ihany fitaovana an-tserasera ho an'ny karazana mpampiasa rehetra, na inona na inona solosaina findainy na solosaina findainy ampiasaina ary ny Operating Systems ampiasaina, fa amin'ny tranga manokana an'ny Linuxeros ary ny GNU / Distros Linux manana tombony amin'ny famoahana tombony amin'ny tontolon'ny Cryptocurrencies.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Utopia: tontolo ekena P2P itsinjaram-pahefana mahaliana ho an'ny Linux
Mnel dia hoy izy:
Azo antoka fa maimaim-poana na loharano misokatra ity tetikasa ity. Heveriko fa tsy afaka mahita ny kaody ho an'ity tetikasa ity ianao. Tsy azontsika antoka mihitsy izay ataony raha tsy afaka mahita ny kaody. Marina ve izany?
Valiny tamin'i Mnel
Miarahaba, Mnel. Misaotra tamin'ny hevitrao. Araka ny efa nolazainay tao amin'ilay lahatsoratra, nilaza ny tetikasa DeFi fa tsy misokatra 100%, ampahany ihany io. Na izany aza, antenainay fa rehefa mandeha ny fotoana, dia hataon'ireo mpamorona namorona azy 100% ary angamba maimaim-poana aza. Amin'izao fotoana izao dia mbola mila mitombo, mivoatra ary manatsara betsaka, indrindra amin'ny lafiny malalaka sy misokatra ho vahaolana IT tsara ho an'ny mpampiasa Linux. Amin'izao fotoana izao, araka ny voalazan'ny lohateny hoe "Tontolo iainana mahaliana P2P itsinjaram-pahefana ho an'ny Linux." Ary raha tsy misy izany dia antenaina fa hisy mpamorona na vondrom-piarahamonina hafa hamorona vahaolana hafa mitentina 100% malalaka sy misokatra.
Keven dia hoy izy:
Ny kaody loharano mihidy amin'ity fampiharana ity dia tena mety: tadidio hoe firy ny Hacks sy forks open applications. Ny zava-drehetra dia misy mahatsara sy maharatsy azy, saingy heveriko fa eo ambanin'ny asan'ny utopia dia vita tsara ny zava-drehetra.
Valio an'i Keven
Miarahaba, Keven. Misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitrao ary lazao anay ny fanamarihanao momba ny Utopia.
Improvement dia hoy izy:
Utopia dia iray amin'ireo ecosystem tsara indrindra amin'ny rehetra efa nampiasaiko hatrizay! Mahazo aina sy tsy mitonona anarana, inona koa no ilainao?
Valio an'i Islah
Miarahaba ry Islah. Misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitrao ary lazao anay ny traikefanao momba ity app ity.
GameMaker Studio 2: IDE ho an'ny lalao 2D Azo alaina ho an'ny Linux ankehitriny
Rafitra fiasa hafa amin'ny Linux: safidy 3 misy izao